'Snye Na-egbochi Gị? | Martech Zone
'Snye Na-egbochi Gị?
Monday, November 7, 2011 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Otu nsogbu anyị nwere na ntuli aka ugbu a bụ na ha toro oke ogologo. Gbalị ịtụ anya ka nwa akwukwo mee ya ihe karịrị otu afọ n’emeghị ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume. O siiri Onye isi ala ike… onye ọ bụla na-eche onye na-agba ebe a ebe ọ nọ n'okporo ụzọ oge niile na-anwa ịhọpụta. A na-enyocha ihe ọ bụla nke ọ bụla n'ime okwu ọ bụla n'ụzọ aghụghọ ruo ọnwụ ruo mgbe mgbasa ozi anyị nwere ike ịchọta ụdị mkpụmkpụ nke esemokwu ịwụkwasị. ọ na-asọ oyi.
Abụghị m nwa akwukwo, mana itinye onwe gị na ntanetị na mgbasa ozi ga-emeghere gị otu nyocha ahụ. Ka ị na-aga n'ihu na-ede, tweet, melite na ịkekọrịta, ohere ị ga - eji nweta onwe gị zuru oke 100%. Ọ bụrụ na ịmeghị, ị naghị etinye obi na agụụ gị na nke a. Ana m etinye ụkwụ m n'ọnụ m mgbe niile. Otu ụbọchị, m ga-agwa ndị mmadụ enweghị iwu na social media, mgbe ahụ Aga m na-eti mkpu na onye ọ bụla na Google+ maka ụzọ ha si eji ya.
Ọtụtụ ndị mmadụ (na ụlọ ọrụ) ga-atụ ụjọ na ha ga-ejide onwe ha dị ka nke a.
Ọ bụghị m.
N'ihi gịnị? Agaghị m ekwe ka egwu nke ịdị ka onye nzuzu gbochie m ikwupụta onwe m. Ọ bụrụ na ị masịghị ya, dịka Chris Brogan kwuruỊ nwere ike ịhapụ m nke gị.
M zutere mmadụ abụọ dị ịtụnanya na BlogWorld Expo na achọrọ m ịkpọ ha ebe a. Otu bụ Aisha Tyler, a onye nwere ọtụtụ talent (gụnyere ndị kasị ngwa wit m na mgbe àmà) Apụghị m ike depụta ha.
Mgbe isi okwu, enwere m ịnọdụ ala Nwanyị Lori, onye ama ama ama n’arụ ọrụ ya na PBS na ọrụ ya na-aga n’ihu na social media, media, na agụmakwụkwọ. Anyị nọrọ ọtụtụ awa na-ekwu okwu… ọbụnadị a gọziri m ịkọrọ Miss Lori n'ụtụtụ a! Enweghị m ike itinye ọnụ n'okwu ọ ga-eju di na nwunye.
Na-akpali… the mmadụ abụọ nke mere ihe a na-apụghị iji chefuo m nwere mmetụta dị nkọ, ike, ojii, nwanyị na mma. Ugbu a - tupu ịmalite ịtụfu njakịrị nwoke ruru unyi gị, m ga-ebipụ gị ebe ahụ. Ọ bụghị ịma mma nwetara m… ọ bụ ụjọ dị egwu nke ụmụ nwanyị abụọ a. Echere m na o siiri m ike ịpụ apụ mana enweghị m ike iche n'echiche ihe niile gaara egbochi Aisha na Miss Lori. O mebeghị ka ha kwụsịlata. Ha na-enwu n'okporo ụzọ n'ebe nile ha arahụla. Na mgbasa ozi mgbasa ozi bụ ihe na - esote ha ka ha merie (ha adịla mma n’ụzọ ha!).
Akwụsịbeghị m ichebara ya echiche.
Otu n'ime ihe ndị mere ka uto m na ụlọ ọrụ a n'afọ ole na ole gara aga bụ ikike m nwere ịrụ ọrụ karịa egwu ọdịda. Naanị m kwụsịrị ige ndị mmadụ ntị bụ ndị gwara m na enweghị m ike, agaghị eme ma ọ bụ ghara. Akwụsịrị m ige ndị ibe m ntị, ndị enyi m na ndị ezinụlọ m. M na-aga n'ihu na agbanyeghị. Ndi mmadu… Abụ m 43! Nke ahụ bụ oge o were m iji merie na ịga n'ihu. Ọbụna taa, mgbe mmadụ kwuru na ndị folks na-ekwu okwu n'azụ m ma ọ bụ na ha na-ekerịta asịrị, anaghị m agbahapụ - m na-awakpo. Jọ tụrụ m afọ iri abụọ. Ọ dịkarịa ala ọkara nke ndụ m zuru, ma nke onwe m ma ọkachamara. Enweghị m egwu, mana agaghị m ekwe ka egwu kwụsị m ọzọ.
Nke ahụ kwuru… Abụ m onye nzuzu ma e jiri ya tụnyere Aisha na Miss Lori. Ha abụọ gbabara na soshal midia na-enweghị ndị na-akwado ha (ndị gbara m gburugburu gbara m gburugburu). Ha abụọ sitere na mgbasa ozi ọdịnala ebe mgbasa ozi ọha na eze dị (ma ọ ka) ka nwere obi abụọ. Ha abụọ bụ ụmụ nwanyị, na ọdịbendị enwere oghere na ụmụ nwanyị na teknụzụ. Ha abụọ nwere mmalite dị egwu ma na-aga n'ihu na ọrụ ọdịnala. Ghara ikwu na ụlọ ọrụ a abụghị ihe ndọta dị iche iche.
Ma ha mere ya na agbanyeghị.
N'ihi gịnị? Na ịge ha ntị, ọ bụ n'ihi na agụụ na ọhụụ ha ịhụ na ohere dị na ụlọ ọrụ a buru ibu karịa ụjọ ọ bụla ha nwere (Amaghị m ma ọ bụrụ na ha na-atụ ụjọ!). Aisha tinyere ya n'ụzọ zuru oke na mbibi ikpeazụ nke mbibi… f *** ha ọ sịrị. Anọ m na-ege ntị na nke ahụ n'ihi na ọ bụ ihe m na-ekwu n'ime oge ọ bụla mmadụ kwuru n'azụ m banyere mbibi m na-abịanụ.
Ga-aghọta na nke abụọ ị kewapụrụ onwe gị na ìgwè ehi, ị dị iche. Ìgwè ehi ahụ chọrọ ịdọrọ gị n’azụ. Ha achọghị ka ị gbaa ọsọ. Ha chọrọ ijide gị. Gaghị ekwe ka ha. Luck for you, enwere ndi ozo di ka gi nke gha enyere gi aka. Ka mụ na ndị enyi m nọrọ oge Ngosi BlogWorld, Achọpụtara m na mụ na ndị mmadụ nọ n'ụlọ na-achọ ka m nwee ihe ịga nke ọma. Achọrọ m ka ha nwee ihe ịga nke ọma.
Kedu onye na-egbochi gị? A ma m ihe i nwere ike ịgwa ha… nanị juo Aisha.
VaultPress edobere WordPress nchekwa
Tozọ isi zube okporo ụzọ weebụsaịtị gị
Nov 7, 2011 na 3:06 PM
Doug, agabeghị na blog gị mbụ, Miss Lori tinyere ya na Twitter wee gụọ ya… wee cheta na ị hụrụ gị na #Bwela mana ọ maghị onye ị bụ. Ya mere, ruo n'ókè, nke a bụ ihe ịtụnanya na n'eziokwu. Abụ m onye nwere mmasị, mana ka ụjọ jide m ọtụtụ oge na ndụ m. Aga m abụ 35 na ụbọchị ole na ole, mana m na-arụsi ọrụ ike ịhapụ ụjọ ahụ. Enwere m ekele maka post gị ma ọ na-adị mma mgbe niile ịnụ ndị ọzọ ka ha gafere oke ahụ. Daalụ nwoke, nwee ezigbo !!
Nov 7, 2011 na 3:08 PM
Daalụ nke ukwuu Matt!